Saint Lucia: Fetin'ny Jounen Kwéyòl (Andro Kiriolona)	Voadika ny 03 Novambra 2012 18:22 GMT
Zarao: Tamin'ny alahady (heriny) no nankalazan'ny tao Saint Lucia ny fety fanao isan-taona antsoina hoe Jounen Kwéyòl (Andro Kiriolona). Ny androm-pankalazana no faratampon'ny Iray Volan'ny Vakoka Kiriolona. Ny fandaharam-potoana hafa mandritra io volana io dia ahitana ny Fifaninanana Oliravina Lawenn Kwéyòl (Mpanjakavavy Kiriolona), Fifaninanana Woulé Laba (karazana lalao cricket) ary ny fisokafan'ny Harold Simmons Folk Academy. Amin'ny Jounen Kwéyòl, ny vondro-piarahamonina voafantina ny mampiantrano ny foara izay hankalazana ny kolontsaina Kiriolona amin'ny alalan'ny fomba fiakanjo, hira ary ny sakafo indrindra indrindra. Ny vondro-piarahamonina nandray ny lanonna amin'ity taona ity dia Marigot, Patience (Mon Repos) ary Vieux Fort.
(when you tell someone – ‘good morning’- it is your way of saying – ‘I am happy you are alive.’ Have a good Kweyol day Ifikiro ny tenin-dreninao. Io ny fiteny nahatonga ny kolontsaina ara-tsosialy sy politika namolavola hatrany ny lovan-kolontsaina sy ny hoavintsika. Io ny fiteny navelan'ny [razantsika] ho fampahatsiarovana antsika fa tsy maintsy mikiry manohitra ny zavatra hafahafa rehetra isika: Kweyol izany ‘tsy teny frantsay vakivaky’ fa ilay fanahin'ny razambentsika Afrikana izay velona hatrany nitety andro samihafa. Io no fomba hifandraisana sy hifampiresahan'ny tsirairay.
(raha miteny amin'olona ianao hoe – ‘tsara maraina’- izaynyfomba fiteninao – ‘Faly aho fa velona ianao.’ Manàna andro Kweyol mahafinaritra Brenda Paul-Jules mahatsapa fa mahaliana kokoa ny olona ny Jounen Kwéyòl noho ny amin'ny fahaleovantena aza:
Tantaran'ny Karaiba farany 1 andro izayDominikaMamely Mafy An'i Dominika ‘Nosin'ny Natiora’ Amin'ny Tafiotra Mahery Erika Ny Herin'ny Natiora
FitenyMediam-bahoakaMozikaSakafoZavakanto & Kolontsaina